आज सोनिकाको इङ्गेजमेन्ट ! भन्छिन्, ‘साडी लगाएर तयार हुँदैछु’ (भिडियो हेर्नुस्) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/आज सोनिकाको इङ्गेजमेन्ट ! भन्छिन्, ‘साडी लगाएर तयार हुँदैछु’ (भिडियो हेर्नुस्)
आज सोनिकाको इङ्गेजमेन्ट ! भन्छिन्, ‘साडी लगाएर तयार हुँदैछु’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अनिल गुरुगंले सोनिकालाई फोन गरे । उनले आफु प्रहरी हुँ भन्दै सोनिकालाई फोन गर्दा उनले उनका विषयलाई लिएर गरिएको चर्चाका विषयलाई जोडेर उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले आफुलाई प्रहरी भनेर सोनिकालाई फोन गरे । पूर्व युवराज पारस शाहको १२ लाख चोरी गरेको आरोप लगाउँदै एउटा मिडियाले समाचार बनाएपछि निकै चर्चा भएको थियो । अनिलले सोही विषयलाई लिएर प्राग्कं गरेका थिए । पूर्व युवराज पारसको १२ लाख लिएर गएको भन्ने विषयलाई लिएर उनले फोन मार्फत रमाइलो गर्ने कोशिष गरेका छन् ।
पूर्व युवराज पारसकी पुत्री १९ बर्षीय पुर्णिका शाहले भनिन् ‘मैले केटा भेटिसके’ [भिडियोसहित]